Sida loo fayl gareeyo musmaarrada ragga oo aad u ilaaliso talaabo talaabo talaabo ah | Ragga Stylish
Sida loo xareeyo ciddiyaha
Michael Serrano | | Daryeelka shaqsiyeed
Ogaanshaha sida loo xareeyo ciddiyahaaga oo looga dhigo mid la soo bandhigi karo ayaa aad muhiim u ah. Waana taas gacmuhu wax badan ayey kaa sheegaan, adiga oo door muhiim ah ka ciyaara aragtida ugu horeysa, taas oo ah sababta ay ugu habboon tahay inay u ekaadaan si hagaagsan oo caafimaad qaba.
Si aad cidiyahaaga ugu ilaaliso xaalad wanaagsan, waa inaad gooysaa oo aad fayl gareeysaa ugu yaraan hal mar usbuucii. Raadi sida loo daryeelo ciddiyahaaga oo gacmahaaga u samee aragtida ugu fiican ee suurtogalka ah.
1 Sababaha loo xareeyo ciddiyahaaga oo aad u daryeesho
2 Sida loo xareeyo ciddiyaha talaabo talaabo
2.1 Marka hore waa inaad gooysaa
2.2 Riix jeexjeexyada
2.3 Nuuradda dhaaf
3 Manicure ragga ee xarumaha gaarka ah
Sababaha loo xareeyo ciddiyahaaga oo aad u daryeesho
Xaqiiqdii in kabadan hal mar waxaad la kulantay qof leh ciddiyo aad u qaniinsan ama aad u dheer. Muxuu ahaa aragtida ay kugu reebtay? Xaqiiqdii way xun tahay, ama ugu yaraan uma fiicna sidii ay ahaan lahayd. Sababta ayaa ah in aan cidiyaha la wadaagno nadaafadda, nadaafadda ama fiiro gaar ah oo faahfaahsan.
Maaddaama dhammaan arrimahan ay aad muhiim u yihiin, gaar ahaan qaybta xirfadda, Dayactirka ciddiyaha waa inuu noqdaa mudnaanta koowaad ee ragga oo dhan.
Si ka duwan qalabyada (iskuxirka, tusaale ahaan) ciddiyaha looma shaqeyn si loo helo ammaan ama ay u noqdaan diiradda sawirkaaga. Taas bedelkeeda, waa inaad ku qanacdaa haddii ay gebi ahaanba ogaadaan. Haddii uusan qofna ogaan ciddiyahaaga, waxay ka dhigan tahay inaad si sax ah wax u qabanayso.
Sida loo xareeyo ciddiyaha talaabo talaabo
Aynu aragno waxa ay u baahan yihiin cidiyaha iyo maacuunta maacuunta. Sida aaladaha kala geddisan, had iyo jeer si taxaddar leh ugu qabso si aad uga fogaato dhaawacyada oo aad kor ugu qaaddo koritaanka ciddiyaha saxda ah oo caafimaad qaba.
Marka hore waa inaad gooysaa
Ciddiyaha badanaa waa la jarjaraa kahor inta aan la xareyn. Intooda badani waxay leeyihiin farsamo weyn talaabadan koowaad ee daryeelka ciddiyaha, laakiin ma dhaawaceyso inaad xasuusato sida loo sameeyo.
Isticmaalidda masar goye wanaagsan (ama maqas haddii aad hiigsan tahay), jar ciddiyahaaga adigoo raacaya qaabkooda dabiiciga ah. Ciddiyaha ciddiyaha ayaa gaagaaban, laakiin ka taxaddar inaadan dhaafin, maxaa yeelay jarista ciddiyaha oo aad u gaaban waxay u eg tahay mid xanuun badan. Intaa waxaa dheer, si aad u awoodo inaad mar dambe fayl gareyso, waa lagama maarmaan in wax yar oo cad laga tago.
Dhinaca kale, qoyaanku wuxuu u dhaqmaa sida jilciyaha oo wuxuu fududeeyaa habka, sidaas isla markiiba ka dib qubaysku waa wakhti aad u fiican oo lagu jaro ciddiyahaaga.
Sidaad ogtahay, cuticle waa qaybta ay ciddiyaha kula kulmaan farta. Maqaarka khafiifka ah ee maqaarku wuxuu u eg yahay inuu weynaado oo uu qaato boos ka badan sidii ay ahayd. Haddii aad u baahatid inaad googo'yahaaga ka ilaaliso, hoos ugu riix iyaga oo kaashanaya spatula ilaa aad ka kashifayso aagga hoose ee cad, qalooca.
Duug saliid yar ama gacmahaaga ku qoy dhowr daqiiqo si aad u jilciso goyntaada. Si xun ula dhaqmida xubinta taranka jirka waxay sababi kartaa caabuqyo iyo dhibaatooyin kale qaybtaan ciddiyaha ah. Marka noqo mid jilicsan, ha ku riixin jeexitaanka meel aad u fog (markay tahay ciddiyaha, xanuunku waa calaamad la hubo inay ku filan tahay). Iyo wixii ka sarreeya, ha ka jeexin.
Faylka ayaa kaa caawin doona inaad ku darto taabashada dhammaadka ciddiyahaaga. Waad fayl garaysan kartaa geesaha ciddiyahaaga ka dib qaab laba jibbaaran ama wareegsan. Dhinaca kale, fayl garaynta ciddiyahaaga had iyo jeer raadinaya isku mid waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysato natiijo wanaagsan. Si tan loo sameeyo, si kooban u baadho ciddiyahaaga oo cadee waxa ka hor istaagaya inay u ekaadaan qaab caadi ah dherer ahaan.
Ku dhammee mashiinka ciddiyaha, gaar ahaan haddii ay u muuqdaan qaar caajis ah.. Waxaa loo qaabeeyey sidii baloog, qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad dib u soo nooleyso. Qalabaynta ayaa la mariyaa ciddiyaha, taas oo gacan ka geysaneysa hagaajinta wareegga oo ka dhigaysa mid jilicsan. Waxay sidoo kale ku dareysaa xoogaa dhalaal ah iyaga.
Goynta iyo fayl garaynta ciddiyahaagu waa muhiim, laakiin ha iloobin nadiifinta. Mararka qaarkood ku dhaq iyaga saabuun iyo biyo kuma filna: waxaad u baahan tahay a caday. Qalabkani waa mid la awoodi karo oo aad wax ku ool ah. Ku dar buraashka cadayga qalabkaaga nadaafadda una isticmaal inaad ku nadiifiso cidiyahaaga markasta oo ay lagama maarmaan noqoto. Sida talaabooyinkii hore oo kale, qoynta gacmahaaga ka hor cadayga cidiyahaaga ayaa kaa caawin doonta inaad shaqada ka dhigto mid fudud oo dhaqso badan.
Manicure ragga ee xarumaha gaarka ah
Waxay ku jirtaa qof walba dantiisa inuu ogaado sida loo xareeyo loona ilaaliyo ciddiyaha guriga. Si kastaba ha noqotee, xitaa sidaas, waxaa suurtagal ah in mararka qaarkood (ama dhammaantood) aad doorbideyso inaad aado xarun khaas ah. Waqti fiican oo aad ku aado xirfad gacmeed ragga ah ayaa ah maalinta arooskaaga.
Manicures ragga waxaa ku jiri kara daaweyn kala duwanLaakiin ha walwelin, soo-qoristu ma aha mid ka mid ah (illaa aad codsatid mooyee). Adeegga aasaasiga ahi badanaa wuxuu ka kooban yahay keliya goynta iyo xaraynta. Daaweynta qotada dheer waxay ku dartaa daryeel dheeri ah, sida soo saarista jirka iyo qoynta gacmahaaga si ay dib ugu helaan muuqaalkooda iyo jilicsanaanta ka dib shaqo adag oo jimicsiga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo xareeyo ciddiyaha
Jimicsiyada ugu fiican ee miisaanka lagu dhimo
Cuntooyinka leh fitamiin C